UJuan José Millás, ophumelele imbasa yePlaneta Award (2007) | Uncwadi lwangoku
UJuan José Millás: iincwadi
Phantse iminyaka engamashumi amahlanu yomsebenzi, umbhali waseSpain kunye nentatheli uJuan José Millás yindoda ezinikeleyo yeeleta. Okwangoku, ineempapasho ezingaphezu kwama-35, kubandakanya iinoveli, amabali, amanqaku kunye neengxelo. I-Valencian yema kwicandelo lokubhala kwii-80s ngencwadi yakhe yesine: Iphepha elimanzi (1983). Eli bali lamapolisa labhalwa ngesicelo sompapashi soncwadi lolutsha, kwaye ukusukela kwinkulumbuso yayo yaba nempendulo enkulu.
Kwakusemva kokuphumelela kwale noveli uMillás wangena kubuntatheli, umsebenzi awayewenza ngesimbo sakhe sokuqala. Unikwe amatyeli alishumi ngamabhaso abalulekileyo, zombini uncwadi kunye neendaba. Babo oogqirha ababini imbeko causa, enikezelwa ziiyunivesithi zaseTurin naseOviedo.
1.3 Inkqubo yobuntatheli
1.4 Iinoveli zikaJuan José Millás
2 Isishwankathelo seencwadi ezithile ezibhalwe nguJuan José Millás
2.2 Abafazi ababini ePrague (2002)
2.3 Ihlabathi (2007)
2.4 Umfazi ophambeneyo (2014)
2.5 Ubomi ngamanye amaxesha (2019)
UJuan José Millás García wazalelwa eValencia (Spain) ngoJanuwari 31, 1946. Uvela kusapho olukhulu, ungowesine kubantakwabo abasithoba. Abazali bakhe yayinguVicente Millás Mossi — owayengumqambi kunye nochwepheshe kwezamashishini — noCándida García. Uchithe iminyaka yakhe yobudala kwidolophu yakhe, de ngo-1.952 wafuduka nosapho lwakhe ukuya Ukuchuma, idolophu eyaziwayo ye Madrid.
Wafunda ebusuku, kuba ebesebenza njengomsebenzi okwexeshana kwibhanki yokonga. Iminyaka emithathu wafunda ifilosofi kunye neeleta —KukwiFilosofi ePhilileyo- kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid, ethi ixesha lasekhohlo kamva. Kwangoko ishumi leminyaka le ngama-70 ' wajoyina iofisi yeendaba eIberia.
Ekuqaleni, wayeqhula ngombongo, nangona ekugqibeleni wagqibela ngokuzinikela kumtsalane webali.. Ngo-1975, wapapasha inoveli: I-Cerberus zizithunzi; athe wafumana ngayo ibhaso leSamoamo kwakuloo nyaka kwaye wazuza ukuqonda okukhulu kubagxeki boncwadi. Kwiminyaka emithandathu elandelayo wazisa imisebenzi emibini: Umbono wokurhaxwa (1977) kunye Igadi engenanto (1981).
Ngo-1983, wapapasha incwadi yakhe eyaziwa kakhulu: Iphepha elimanzi, inoveli ebambe amawaka abafundi. Emva kwempumelelo, kule minyaka ingama-3 idlulileyo Uye womeleza ikhondo lomsebenzi wakhe wokubhala ngo Iimbali ezili-16 ezimenze ukuba afaneleke amabhaso abalulekileyo. Phakathi kwezicatshulwa, oku kulandelayo kuyabonakala: Abafazi ababini ePrague (2002), awaphumelela ngayo amabhaso ePrimavera; Y Ihlabathi (2007), ophumeleleyo kwi-Planeta (2007) kunye neNational Narrative (2008) amabhaso.
Kwangoko i-90 ', waqala umsebenzi wakhe wobuntatheli kwiphephandaba El País kunye namanye amajelo aseSpain. Kuye kwaphawulwa ngokubhala iikholamu ezibizwa ngokuba "ngamanqaku", apho atshintsha khona isiganeko esiqhelekileyo sibe yinto emnandi. Kule ndawo uhlonitshwe amatyeli amaninzi, phakathi kwamabhaso akhe ngala: UMariano de Cavia Journalism (1999) kunye noDon Quijote wobuntatheli (2009).
Iinoveli zikaJuan José Millás
I-Cerberus zizithunzi (1975)
Umbono wokurhaxwa (1977)
Igadi engenanto (1981)
Ileta efileyo (1984)
Isizungu yile (1990)
Emve Ekhaya (1990)
Isidenge, ifile, i-bastard kwaye ayibonakali (1995)
Uluhlu lwealfabhethi (1998)
Sukujonga phantsi kwebhedi (1999)
Abafazi ababini ePrague (2002)
Into endiyaziyo ngamadoda amancinci (2010)
Umfazi ophambeneyo (2014)
Ukusuka kwizithunzi (2016)
Ibali lam eliyinyani (2017)
Makungabikho namnye oleleyo (2018)
Ubomi ngamanye amaxesha (2019)
Isishwankathelo seencwadi ezithile ezibhalwe nguJuan José Millás
Intatheli UManolo Urbina uqala uphando malunga "nokuzibulala" kwe umhlobo wakhe wakudala ULouis mary, ukususela kurhanelwa ukuba ubulewe. Lonke olu hambo, kwangaxeshanye ubhala into eyenzekileyo kwinoveli, njenge-backup xa kukho into eyenzekileyo kuye. Abafazi ababini ababalulekileyo ebomini bomfi -Teresa noCarolina- bayakumnceda uManolo ngexesha lophando.
Ukukhangela imikhondo, uTeresa ufumanisa ibrifkheyisi enemali kunye namaxwebhu okulalanisa, abandakanya usokhemesti. Yonke into iqala ukwahlukana xa uMhloli uCárdenas ethatha izintso zenkqubo. Eli gosa liya kufumanisa elinye lamaqhekeza asisiseko okusombulula ityala ngokuqhwanyaza kweliso, ngesiphumo esimangalisayo nesingakholelekiyo.
Iphepha elimanzi (Incwadi ye ...
En la ukukhangela Yomntu obhala ngobomi bakhe, uLuz Acaso thatha iphephandaba kwaye ungqubekile kwi igama umbhali oselula odumileyo. Sele egqibe-egcwele iimfihlakalo-uya kwi-ofisi yombhali yokwenza isicelo esinjalo; uyayamkela, ayamkele. U-vlvaro Abril (umbhali), kwelakhe icala, uzifumanisa ekumzabalazo wangaphakathi: ngaphandle kwento yokuba incwadi yakhe yokuqala yamenza ukuba aphumelele, ukusola okungapheliyo kokuba ngunyana owamkelweyo akumvumeli ukuba onwabe.
Kudliwanondlebe de Luz kunye ne-vlvaro, Ubalisa iinyani zobomi bakhe kubonakala ngathi ithathwe kwi Imiboniso bhanyabhanya eyintsomi. Ngelixa indibano phakathi kwezi zimbini zihamba, i-nexus ikhula ngenxa yeziganeko eziqhubekayo. Ukongeza, abalinganiswa abaliqela bajoyina iyelenqe, phakathi kwabo, uMaría José, umhlobo kaLuz onesicelo sika-vlvaro.
Ngokutyhila amaphepha iimfihlakalo ezininzi, iinyaniso, inkohliso kunye namaphupha amaninzi aqala ukuvela ... Ezi zinto zijikeleze wonke umntu ngexesha lesakhiwo, esenzeka kuphuhliso olunomdla kude kuphele isiphelo okungalindelwanga mntu.
Abafazi ababini ePrague ...
Inkwenkwana -uJuan José- ubalisa ngokwembono yakhe yobuntwana; ukuzalwa kwakhe, iminyaka yokuqala eValencia kunye nokudluliselwa kwidolophu yakowabo esixekweni saseMadrid. Uchaza amava akhe kwimeko yasemva kwemfazwe, Ezele luvuyo kunye nosizi, kwimozulu ebandayo, ngobuhlobo obutsha kunye nothando olungafunekiyo. Inyani ekufuneka eyiqhelile, intle okanye imbi.
Njengokuba ekhula, ubalisa indlela abalahla ngayo abantu ababalulekileyo Kwaye onke loo mathuba angwevu kunzima ukujamelana nawo Ukungabikho kwabathandekayo kumisela ukulungelelaniswa yomntwana ofikisayo, ozama ukuphila ngeyona ndlela intle. Ibali liphawulwe ngamaxesha aliqela obukho balo- ngendlela umntwana aqhubeka ngayo ukuba yindoda- phakathi kwenyani kunye nomfanekiso ngqondweni.
UJulia ngumlobi weentlanzi ogqiba ekubeni afunde ngakumbi ngeelwimi, oku kuba que Uxhalabele umphathi wakhe uRoberto, oyingcali yeepilologist. Uzifundisa ngendlela azifundise ngayo, kwaye kule nkqubo abalinganiswa bafika engqondweni abo athetha nabo efuna izisombululo. Ukongeza ekusebenzeni kwindawo yokuthengisa iintlanzi, uJulia ukhathalela uEmerita, ogulela ukufa azimisele ukusweleka.
Ngenye imini ngelixa le ntombazana yayisiya e-Emerita, undwendwelwe nguMillás, intatheli enqwenela ukwenza ingxelo nge-euthanasia. Emva kokumazi ngakumbi uJulia, Ngokukhawuleza ucebisa ukubhala ibali lakhe. Ngendlela, le ndoda yayihamba ngebhloko yoyilo. Ngendlela ebukhali, yonke into iyatshintsha ...: U-Emerita utyhila i-enigma, kwaye intatheli iyamangaliswa.
Umfazi ophambeneyo (iNoveli)
UJuanjo Millás ngumbhali ubalisa iiveki ezili-194 zobomi bakhe, esekwe kwidayari yakhe. Apho uveza ubuntu bakhe, into enengqiqo, evuya, ehlekisayo kunye neyobuhlungu; kwindawo emiselweyo phakathi kwengqondo kunye neparanoia. Kwangokunjalo, uchaza amanye amava, anjengokundwendwela i-psychoanalyst yakhe, izinto azithandayo, unyango kunye nobomi bemihla ngemihla bendoda ebukele.
Isahluko ngasinye esincinci silanda amaxesha angaqhelekanga, kunye neemeko ezingaqhelekanga nezinomdla. Se bonisa iimeko ezilula: njengokuxinana kwezithuthi, iingxaki zekhaya, okanye ukonakala kwemoto yakho. Libali eliyintsomi elinokuthi okanye lingabinayo inyani, malunga nomntu oqhelekileyo, kodwa lithe kratya kwaye linemibono eyoyikisayo.
Ubomi ngamanye amaxesha ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » UJuan José Millás: iincwadi